Ngano dzaIsopu | Faraitose's Blog
Pfumo nemuridzi waro
Iyi ngano iyi ndakainzwa musuuno. Yakandifadza chaizvo ndikati zvimwe pane anga nakidzwa wo nayo .
Zvinonzi musuuno, VaTsvangirai nekufamba famba kwavarikuita, vaifamba zvavo muAddis Ababa. Vainge vari kutevedza mumvuri we stubhu vachitaura zvavo nevamwe vaiva vava shamwaridza muguta imomo. Vakaerekana vadzivirirwa pamberi pavo nemumwe murume. Aive mukuru asi asati achembera – sezvatakangoita wo isusu. Aive ne mhumhu mudiki asi akakombama kombama musana. Muruwoko rwerudyi maive mune mubhadha murefu uri mukobvu, waito enzana kureba naVaTsvangirai. Kufamba aito zendamira mubhadha uyu onzvizvuva. Tsanda dzemumaoko dzaive dzakakura dzakati tande kurakidza kusimba chaizvo.
VaTsvangirai, semunhu aive nerudo nevanhu, vakabva vaziva kuti varikumiswa. Pakutanga vaiti zvimwe mukuru uyu aida kuvakumbira rubatsiro. Asi hazvina kutora nguva kuona kuti matarisirwo avaiitwa airakidza kuti vari kuongororwa zvakapinza. Vakanzwa maziso emurume uyu achipinda mumuviri mavo nemupfungwa dzavo. Vakava semunhu ari musvo.
‘Vakuru‘ ndiye murume uyu akatanga, ‘ndingade chaizvo kumbokurukura nemi . Maonero andakuitai makaremerwa . Ndatadza ?‘
‘Aiwa, hamuna kutadza. Kuti ndive kuno kure kure nekumusha kwangu kuti ndito tsvanga rubatsiro . Kwedu tinoti : chitsva chinobva murutsoka.’
Murume uyu akarakidza VaTsvangirai chikwangwari chesimbi chaive chakanyorwa nemavara ekuIthiopia ikoko, saka vedu ava, hapana akaziva kuti pakanzii. Vakati vabvunze, asi murume aive achakamira pamberi pavo achibva ati , ‘ Ndinonzi Esap, ndiri sarungano wenyaya dzino chenjedza nekuraira’ .
‘Kwedu tinoiziva ESAP . Kuti yakati chenjedza ndinganyepe nekuti takabva taramba tichingo ipisa hupenyu hwedu pasina dzidzo. Chii chamungati fundisa iye zvino ?‘
‘Saka tino zivana ! Chete Esapu wenyu uyu handifunge kuti ndini ba. Zvisineyi, pindai nepapa’.
VaTsvangirai vakaendwa navo mukamwe kamba kaive kuseri kwezvitoro. Kaive kamba fanika kemumaruwa kematombo nehuswa . Kaive nemahwindo madiki asi aipinza zuva. Mahwindo acho aive ari ekukwidibirwa nemiti yakavezwa yobatanidzwa. Kukaona nekukapinda kamba aka zvaite sekunge munhu uri kupinda munyika yavechikare. Zvisineyi, semunhu anga azvipira kutsvanga zvingabatsire vekumusha kwake, havana kutya kana kuvhunduka. Vakapuhwa pekugara pabonde nejira rekumonera mutsipa rino fuga mapendekete ne chipfuva, kunge munhu akafuga gumbeze.
Mukuru chirema uya ndokubva agara pamberi paVaTsvangirai vakatarisana. Vaive vatofugawo jira vakaisa maoko mukati mejira. Vagere vairerekera mberi kunge kuvhumbama vakabatira mubhadha nechepasi asi ruoko rwakavigwa. Vakatanga nekudhonzera ruoko rwavo rweruboshe kurutivi ndokuburitsa pfumo pfupi raive raka shongedzwa nemavara mavara anoyevedza chaizvo. Rakaiswa pakati pavo ndokuti kuna VaTsvangirai ‘Ndiudzei zvamunoona papfumo iri ?‘
VaTsvangirai vakariyeva vakari penengura nemaziso. Vakazoburitsa maoko vakaringa murume aive pamberi pavo , akabva achimbidza kugutsirira, kuri kupa mvumo yekuribata. Rakasimudzwa rikapimwa muruwoko nekuri pidigura. ‘Pfumo iri ndere kare kare, muremero waro simbi yakadai kashoma kuwanika mazuva ano. Semunhu akambo sevenza pamugodhi ndine karuzivo nesimbi. Rine ngura uye rucheko rwaro rwava nenguva rwagomara . Muzvinyorwa umu mune ropa rakaomerapo kare kare.‘ Akambotura femo, achibva apindirwa asati atanga zvekare.
‘Chii chamungade kubvunza maererano naro pfumo iri ?‘
‘Ndigade chaizvo kunzwa kuti muridzi waro aripi ?‘
Vakabvunza vakatarisa chiso chemurume aive pamberi pavo akanga akavaringa muziso chaimo. Havana kuona muromo uchishama kutaura mazwi avakanzwa mumusoro mavo : ‘Ndaive nemuridzi mumwechete chete akaparara kare kare. Asi ini ndakaparadza vakawanda chaizvo mumaoko evakawanda’ .
‘Maiwana mhinduro yenyu ? Ino revei ? ‘
‘Zvinotoda kufunga zvakanaka. Mungandi dudzire wo imimi ? ‘
‘Zvinoda ndichiziva zviri kuitika kwamabva. Ini handisi mufemberi, asi ndine ngano dzino chenjedza. Imi moenda nengano iyi kwenyu mono taurirana moona kuti chii chamunga wane munyaya iyi.’ Akapindura murume uya akabva asimuka oburitsa vanhu mukamba kaye.
Vava panze VaTsvangirai vakambozeya , vakati rega ndimbo zivisa vabiyangu vemusangano zvandiwira nhasi musango muno. Zvimwe vanga budewo nepamwe. Vakatsvanzvadzira muhomwe vachitsvanga mobhairi foni. Vapedza kuti baye baye vakanzwa VaBiti vachishevedzera munzeve.
‘Ko tipei tinzwe mukuru wangu !’ NdiVaBiti avo.
Vakapirwa nyaya yose naVaTsvangirai. Semunhu gweta remakoko nerudo nebasa ravo VaBiti vaive neruzivo rwezvinhu zvakawanda kwazvo, zvinhu zvakasiyana siyana.
‘Ko Biti, unotii nazvo ? Tokurukura ndadzoka ? ‘
‘Miraipo ndinyatso ronga pfungwa dzangu. Nyaya iyi ndinoiziva. Mirai ndinyatso funga….eh ….eh. Ya a ndaiona zvino. Nangidzo iri paapa izita raSarungano wenyu: Isopu . Kwete ESAP . Ichokwadi Isopu wekare aive nhapwa kunyika dzevaRungu, asi aibva kuIthiopia. Dzimwe nguva, nyika dzatinoti Africa yevatema nguva dzino yaingonzi Ithiopia makare iwayo. Aive mukombani sezvamareva.
Nyaya iyi iye pachake aiidura achiti : munhu mumwechete anogona kuita zvinhu zvakaipa chaizvo. Akaparara iye zviito zvake kazhinji hazvipere naye. Vamwe vanotora maiitiro ake voramba vachizvikuchidza. Saka kana muchida kuti uipi hupere, itai kuti zvinhu zvakaipa zvionekwe pachena nevanhu vese kuti zvakaipa, kunyange munhu wacho anozviita aripo achizivikanwa. Ndiko kuti apinde muguva nazvo.